Samsung က Galaxy S4 ကိုမှန်ဘီလူးဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ် - သတင်း Rule
8ပြည်တွင်းရေးသိုလှောင်မှု GB ကို
ဒါကနယ်ပယ်ဖုန်း. တိုင်းဖုန်းကိုတစ်ဦး galumphing ရှိသည်ဖို့ကိုမျှော်လင့်မနေပါနဲ့, သူ့ရဲ့နောက်ကျောအပေါ်တိုးမှန်ဘီလူး. သင်အလွယ်တကူ Wi-Fi သို့မဟုတ်လက်ကိုင်ဖုန်း network တစ်ခုခုကိုသုံးပြီးတခြားနေရာတွေမှာ Facebook သို့မဟုတ်မှရုပ်ပုံများကို upload တင်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ကင်မရာကိုလိုခငျြလြှငျမူကား - သင် bargain သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပေးနိုင်ပါတယ် - ဒီကြက်သရေရွေးချယ်မှု.
Samsung က Galaxy S4 ကိုမှန်ဘီလူးဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ် (ကနေတဆင့် အဆိုပါ Inquirer) ကိုရီးယားဖုန်း MAKER Samsung က'' ကိုယ့် Galaxy S4 ကိုမှန်ဘီလူးတစ်ဝက်စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်, တဝက်ကိုကင်မရာ, နှင့်စိန်ခေါ် Nokia က Lumia 1020 အတွက် cameraphone သရဖူ. သင်တစ်ဦး 16 MP အာရုံခံကိရိယာကနေမျှော်လင့်ထားချင်ပါတယ်အဖြစ်, optical zoom နှင့် အယ်လ်အီးဒီ flash ကို, က Galaxy S4 ကိုမှန်ဘီလူးပေါ်တွင်ကင်မရာကိုကောင်းစွာလုပ်ဆောင် ...